Iindaba -Inkqubo ye powder metallurgy yaziswa ngamanyathelo amane
Inkqubo yokulungisa umgubo wokunyibilikisa isinyithi kukulungiselela umgubo (ukudibanisa nokuxuba) -ukucinezela ukubumba-ukuhambisa-unyango lwasemva kwexesha.
Le nkqubo ichazwe ngokweenkcukacha apha ngezantsi.
I-1, ukulungiswa komgubo kubandakanya ukulungiswa kwezinto: ngokweemfuno zezinto, ngokwendlela yokwenza izinto, emva koko uxube umxube.Le ndlela iqwalasela ubukhulu be-particle, fluidity kunye nobunzima be-powder. Umgubo umisela umsantsa phakathi kwamasuntswana agcwalisiweyo kwaye uchaphazela nefuthe lokuvala. Kungcono ukusebenzisa imixube kwangoko kwaye ungayishiyi ixesha elide.
2, inkqubo yoxinzelelo kufuneka iqonde indlela yoxinzelelo: ucinezelo lwendlela enye kunye noxinzelelo lwendlela ezimbini Ngenxa yeendlela ezahlukeneyo zokucinezelwa, ukusasazwa kobuninzi bemveliso kwahlukile. Ukunyuka kwenqindi, ukungqubana eludongeni lwangaphakathi lokufa kunciphisa uxinzelelo, kunye nokuxinana kuyahluka ngoxinzelelo.
3. Izinto zokuthambisa zihlala zongezwa kumgubo ukuze kuququzelelwe ukucofa kunye nokudiliza. umsantsa phakathi kwamasuntswana olungumgubo, kunokuba, kwelinye icala, kuthintele uxinano lwemveliso.
4. Kwinkqubo yokucinezela, kufuneka kuqinisekiswe ubunzima bemveliso, ebaluleke kakhulu, kuba ukungazinzi koxinzelelo kwiifektri ezininzi kuya kukhokelela kubunzima obukhulu, obuchaphazela ngokuthe ngqo ukusebenza kwemveliso yokugqibela. Imveliso kufuneka iphephethwe ngumgubo oshiyekileyo kunye nobumdaka kumphezulu wemveliso kwaye ibekwe kakuhle kwisixhobo ukuthintela ukungcola.